नियमित यौनसम्पर्क गर्ने केटिलाई कसरी चिन्ने? शरीरमा देखिन्छन यस्ता लक्षण.. - UflyRadio
Homeमनोरन्जननियमित यौनसम्पर्क गर्ने केटिलाई कसरी चिन्ने? शरीरमा देखिन्छन यस्ता लक्षण..
नियमित यौनसम्पर्क गर्ने केटिलाई कसरी चिन्ने? शरीरमा देखिन्छन यस्ता लक्षण
निमयित यौन सम्बन्ध राख्ने महिला वा पुरुषलाई किटान गर्न गाह्रो छ । तर, महिलाको भने केही शारीरिक रुपमा परिवर्तन आउने दाबी गरिएको छ । पुरुषको तुलनामा केही महिलाको शारीरिक रुपमा परिवर्तन आउने गर्छ । यसलाई यौन सम्बन्धको कारण मात्रै नलिई अन्य मानसिक लगायत कारण मानिन्छ । तर, एक अध्ययनले भने नियमित यौन सम्बन्ध राख्ने महिलाको सजिलै पहिचान गर्न सकिने दाबी गरेको छ ।
सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्सका सोधकर्ताले गरेको एक अध्ययनअनुसार नियमित यौन सम्बन्ध राख्ने महिलाको शारीरिक बनावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एक दिनमा नै धेरै पटक यौन सम्पर्क गर्ने महिलाहरुको नितम्ब अर्थात हिप फुलेर ठूलो हुने गर्छ । अनुसन्धानको क्रममा महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठूलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइएको बताइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा जुन महिलाले एक दिनमै धेरै पटक यौन सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको तुलनामा निकै ठूलो थियो ।
अर्को समाचार:- पुरुषहरुका लागि खुसिको खबर: गर्भनिरोधक साधन कण्डमको बिकल्पमा आयो यस्तो औषधि !! यदि तपाईंको पार्टनर कण्डम प्रयोग गर्दैनन् र तपाईं साइड इफेक्टको डरले गर्भनिरोधक औषधी खान चाहनुहुन्न भने तपाईंका लागि यो खुसीको खबर हुनसक्छ । वैज्ञानिकले पुरुषका लागि गर्भनिरोधक साधन तयार गरेका छन् ।पपुलेशन काउन्सिल र एनआईएचक युनिस केनेडी श्रिवरले एउटा यस्ता जेलको विकास गरेका छन् जसको प्रयोगले पुरुषको शुक्रकिट अस्थायी रुपमा कम हुन्छ ।
यो अनुसन्धानलाई नेतृत्व गरिरहेकी डा. डायना ब्लिथले भनिन्, ‘धेरै महिलाले गर्भनिरोधक चक्की खान सकिरहेका हुँदैनन् र पुरुषको गर्भनिरोधक विधि भ्यासेक्टोमी र कण्डममा मात्र सिमित छ ।’
पिठ्युँ र काँधमा लगाइनेछ यो जेलः
यो जेलको नाम ल्भ्क्रत् राखिएको छ । यसलाई पुरुषहरुले आफ्नो पिठ्युँ र काँधमा लगाउनुपर्छ । यो जेललाई छालाले सोसेपछि यसले असर देखाउनेछ । यो जेललाई बनाउनका लागि टेस्टोस्टेरोनका साथै सेजेस्टेरोन नामको तत्व पनि समावेश गरिएको छ ।
शुक्रकिटको उत्पादनमा कमी ल्याउँछः
सेजेस्टेरोनले पुरुषको टेस्टोस्टेरोनको प्राकृतिक उत्पादनमा रोक लगाउँछ जसमार्फत वीर्यको उत्पादनमा अत्यधिक कमी आउने गर्छ । यसले यौन उत्तेजना र अन्य कार्यमा कुनै असर नराख्ने बताएको छ । यो जेललाई संसारभरीका चार सय २० जोडीमाथि चाँडै नै परीक्षण गरिने बताइएको छ ।
विश्वका १ लाख पुरुषसँग सेक्स गरेर विश्व रेकर्ड बनाउन चाहान्छिन् यि सुन्दरी:- पोल्याण्डकी एक युवतीले आफ्नो जिवनकालमा १ लाख जना पुरुषसँग ओछ्यान तताउने लक्ष्य लिएकी छिन् । भर्खर २२ वर्ष पुगेकी उनले आफ्नो यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि काम सुरुवात गरिसकेकी छिन् र अहिलेसम्म केही संख्यामा पुरुषहरुलाई आफ्नो यौनको चपेटामा पारिसकेकी छिन् ।एनिया लिसेवस्का नामकी ती युवती आफ्नो यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि केवल पोल्याण्डका तन्नेरीसँग मात्र सुत्न चाहँदैनिन् । विश्वका सबै देशमा पुगेर सबै देशका पुरुषसँग सम्भोगको स्वाद चाख्ने चाहना उनको रहेको छ । उनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि हरेक पुरुषलाई सम्भोगका लागि २० मिनेटको समय दिनेछिन् ।
आफ्नो ब्लगमार्फत उनले दिएको जानकारी अनुसार आफ्नो सेक्स म्याराथनको सुरुवात उनले अघिल्लो महिना वार्सा सहरबाट गरिसकेकी छिन् । अहिलेसम्म उनले २८४ जना पुरुषसँग सेक्स गरिसकेको बताइएको छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने जिवनकालमा १ लाख पुरुषलाई सम्भोगको अनुभव दिलाउने लक्ष्य लिएकी यी तरुनीको ब्वायफ्रेण्ड समेत छ । आफुले यौनसुखका लागि सम्भोग म्याराथन गर्न लागेको भन्दै आफ्नो कामलाई मन पराएर कसैले आर्थिक सहयोग गर्न चाहेमा त्यो पैसा सामाजिक काममा लगाउने उनी बताउँछिन् ।
आफुले सेक्सलाई माया गर्ने तथा पुरुष र हँसिमजाक आफुलाई मन पर्ने उनको भनाइ रहेको छ । उनले आफुसँग सेक्स गर्ने हरेक पुरुषलाई २० मिनेटको समय दिने बताएकी छिन् । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।यस अर्थमा उनले १ लाख पुरुषसँग सेक्स गर्दासम्म ३३ हजार ३ सय ३३ घण्टा उनले सेक्समै बिताएकी हुनेछिन् । यसको अर्थ उनले लगातार सेक्स गरेमा पनि एक लाख जनासँग सेक्स गर्न झण्डै ४ वर्ष लाग्नेछ ।उनले आफ्नो योजना पूरा गर्नका खातिर हप्ताको दुइ दिन सेक्सलाई छुट्टाएकी छिन् । २० वर्षमा १ लाख पुरुषसँग सम्भोग गर्ने लक्ष्य लिएकी उनले हरेक शनिवार र आइतबार औषतमा १४.१४ जनासँग सेक्स गर्ने योजना बनाएकी छिन् ।